Tifo letibangwa amathambo namalunga zivamile emhlabeni. Abakwazi ukuthuthukisa ngasiphi yobudala, ngokuvamile kunazo wadalula ukuba anakekele asebekhulile. Nokho, kukhona iqembu izifo ukuthi kukhona azalwa naso noma bathenga ekuqaleni kuka ebuntwaneni. Isibonelo deformity valgus ka kwedolo. ugobile kuthiwa imilenze kungabonwa ngeso lenyama, kunzima ukuhamba futhi kuholela ukukhubazeka. Deformation we amadolo ezinganeni esilaphekayo. Ngakho lesi sifo kufanele ihlonzwe ngendlela efanele usaqala. Ukwelashwa kwalesi sifo kuye kwaba udokotela ohlinzayo olungisa amathambo.
Uyini valgus futhi varus deformity ka kwedolo
I ugobile ngamadolo - lokhu ingenye izenzakalo ezivamile sokugembula phakathi izifo wamathambo. Kungenzeka 2 izinhlobo: X- futhi O okwenyanga. Ezimweni eziningi, le ukusonteka kwenzeka phakathi ithambo ukukhula, ie ebuntwaneni. Ngezinye izikhathi ngamadolo insaliwe kwasebekhulile. Lokhu kungenxa umthwalo anda ohlelweni osteo-articular futhi ukukhumuzeka kwamathambo. Ukwelashwa kusenesikhathi ka ugobile Chile oqondile. Nokho, uma kungekho senzo esithathwayo, lesi sifo bungaholela ekukhubazekeni. Ugobile imilenze ngesimo "X" incwadi ngokuthi valgus deformity. Kungaba kokubili ezimbili futhi eyodwa emaceleni. Sifo kusekelwe luhlolo kanye nesilinganiso ibanga phakathi kwemilenze. Lapho-ke valgus ugobile akuyona esingaphansi 5 cm. Isiguli kumele kungancipha ngangokunokwenzeka futhi ume imilenze ngokushelela ngesikhathi ibanga nesilinganiso.
Varus deformity - a ugobile O angamasongo emadolweni. Isizathu sokuba ukuthuthukiswa yayo nobuthakathaka uhlelo lwamathambo. Njengoba ugobile valgus, varus deformity kungenzeka nganoma isiphi yobudala. Lapho bobabili pathologies ezidinga ukwelashwa ngaleso wezifo zamathambo.
Izimbangela hallux valgus ezinganeni
Valgus deformity ka kwamadolo - akusona isifo ezimele, kodwa ngenxa isimo sokugembula. Warping njalo kuphakama yokulwa nezifo ithambo. Ngenxa yobunzima amadolo zihlanganisa:
anomalies azalwa naso we ngokuhlanganyela.
Ukungabi kavithamini D.
Ukwandiswa umsebenzi ngokomzimba esikhathini bone ukukhula.
calcium ukuntula emzimbeni.
izifo amalunga omzimba.
Valgus deformity ka kwedolo ezinganeni ngokuvamile kwenzeka ngokumelene ingemuva yamathambo. Lesi sifo libhekene engayitholi enganele cholecalciferol - Vitamin D. Ngenxa ukuntula yalolu ketshezi kuba ithambo akuyona waqinisa ngokugcwele. Ngenxa yalokho yanoma yimuphi umsebenzi ngokomzimba ebuntwaneni kuholela ugobile emalungeni ezinkulu - ikakhulukazi ngokuhlanganyela kwedolo. Ngokuvamile, ukusonteka iba lubonakale eminyakeni 2-3 ngesikhathi usana zakhekile Gait.
Ukuze anomalies azalwa naso zihlanganisa kokunciphisa imisipha senyonga ugobile amathambo shin futhi hypoplasia we ngokuhlanganyela kwedolo. Ekukhombeni lezi kombungu kuyadingeka ukuze ukwelashwa ngaleso wezifo zamathambo nokulawula umsebenzi ukusonteka akuyona wathuthuka.
Ngenxa ingcindezi enkulu phezu kwamajoyinti ugobile kungavuka izingane ngubani musa uhlushwa yamathambo, futhi kwezinso zentuthuko. Iqiniso lokuthi uqwanga futhi imisipha izicubu ukhula kancane kunalokho ithambo. Ngakho-ke, imisipha yohlaka nemisipha babuthakathaka. umthwalo njalo kuholela ukusonteka okuqhubekayo umlenze amathambo ithanga.
Warping amadolo e abadala
Kwezinye izimo, ungase valgus deformity ka kwedolo kwabadala. Ngokuvamile kwenzeka kubantu abaphethwe imisipha ukungondleki ethangeni. Ubuthakathaka we imisipha yemilenze kungenzeka ngemuva kokuxinwa izimo zezinzwa ezifana unhlangothi.
Abesifazane amadolo deformity landile post-menopausal. Lapho esegugile, ngenxa yokuntuleka hormone ocansini ukuthuthukisa kwamathambo. Lokhu zokugula lihlotshaniswa 'Washout "calcium. Ngenxa ukusweleka yayo ithambo iba ziyaqothuka futhi lingashajwa. Ngakho-ke, umsebenzi evamile kungaholela ugobile emalungeni asekelayo. Ezimweni eziningi, le ukusonteka kwenzeka kubantu nge Ukukhuluphala.
Izinto eziyingozi ezingabangela i ukuthuthukiswa valgus amadolo ugobile kukhona izifo amalunga namathambo. Phakathi kwabo - a ukuvuvukala njalo emalungeni amadolo (isifo sokuqaqamba kwamalunga). Ngokuvamile kuvela on isizinda ukubheduka noma izilonda zaso. Enye zokugula ezivamile, okuholela ukusonteka, ke gonarthrosis. It libhekene izinguquko isakhiwo uqwanga. pathologies Specific okubangela ukusonteka ngamadolo, zihlanganisa sifo, ankylosing spondylitis, i-rheumatoid arthritis nezinye letindzala zezinzwa izicubu iziyaluyalu.
Isiteji valgus ugobile
Valgus deformity ka kwedolo ihlukaniswe izigaba eziningana. Lokhu kuncike indawo eksisi mechanical mayelana condyle lateral. Setha degree of ugobile kungenzeka ngu-X-ray iphethini. Ngaphezu kwalokho, udokotela alinganise: bangaki degrees Shin sinqatshiwe phandle. Uhlobo ahlukanisa izinyathelo ezilandelayo:
Izindaba Ezintsha. Libhekene yokuthi eksisi mechanical wenziwa kuwo wonke umlenze, itholakala kanye maphakathi lateral condyle femoral. ngaleyo ndlela Drumstick sinqatshiwe kwangaphandle 10-15 degrees. Ngaphezu kwalokho, i-eksisi eqonde ngqo mechanical sidlula maphakathi nesigamu elingaphandle condyle we tibia.
Izinga eliyisilinganiso. Mechanical umlenze-eksisi kuthinta ingxenye engaphandle ye-lateral condyle femoral. I engela ukuphambuka shin kuyinto 15-20 degrees. Ngaphezu kwalokho, eksisi ngokuba condyle elingaphandle tibia nje ngasonqenqemeni.
Sinzima. Libhekene ngalolo joint amadolo ingaphandle ukudlula mechanical umlenze axis. Drumstick sinqatshiwe kwangaphandle ngu degrees engaphezu kwengu-20.
hallux valgus amadolo ukusungulwa isinyathelo kuyadingeka. degree Its ugobile incike amacebo wezokwelapha.
Izimpawu ze-knee sengozini ezinganeni
Ngokuvamile abazali ukubuza uma sekuqala ukuvela valgus deformity ka kwedolo ezinganeni? yobudala wengane kubalulekile sizicabangele lapho senza ngoba uyayazi imbangela. Phela, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-2 ka ukusonteka kancane kwedolo kubhekwa kukho okuvamile. Lokhu kungenxa izici yobudala uhlelo kwemisipha. Izimpawu hallux valgus amadolo zihlanganisa:
ugobile imilenze e "X". Ukucacisa uphethwe yini kufanele ulinganise ibanga phakathi emaqakaleni. Zokugula lidlula 5 cm.
Ukukhathala uma uhamba. Izingane abaphethwe ugobile kwedolo njalo ocelwa ukuba isandla.
Ukungakhululeki emilenzeni uma uhamba. Izingane zingase esekhala ubuhlungu kwedolo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ingane has a deformity valgus ka kwedolo. Izithombe zalesi ugobile kungabonakala amasayithi yezokwelapha noma izincwadi ukuhlinzwa ezingane kanye amathambo. Uma ushintsho ukuma imilenze zifane kwezinso ebonwe izithombe, kubalulekile ukuba kudokotela.
Ngaphandle izici ezingenhla, imakwe izimpawu zesifo main. Ngo yamathambo ezinsaneni waphawula impandla esifundeni occipital, aba esiswini nasesifubeni. Fontanelle ekhanda isikhathi eside engakhuli. Yamathambo ivame ukuhlotshaniswa anaemia, ebonakaliswa pallor kwesikhumba, ubuthakathaka. Valgus deformity bethambekele ekubeni izingane esisindo anda.
Ukuxilongwa ugobile amadolo valgus
Indlela yokubona valgus deformity ka kwedolo? Radiography kubhekwa indlela eyinhloko ekuxilongweni imilenze watsheka. Emva kokuthola udokotela isibhamu uqhuba mechanical umlenze ahlangene inquma isikhundla salo. Uma umugqa lunqatshelwa kusukela maphakathi joint amadolo, kusho ukuthi kukhona ugobile. Ukuze zokugula umsolwa, nje sibheke imilenze ukuma wengane bese ukukala ibanga phakathi emaqakaleni uma serried imilenze, izinyawo. Ngokusho iphethini-X-ray kukalwa enye inkomba - amathambo engela kuka. Uma kuwukuthi degrees engaphezu kuka-10, ugobile khona.
Ngaphezu ekuboneni uhlobo kumele ajube ithimba imbangela yayo. Ukuze wenze lokhu, afeze ukuhlola laboratory. Kubalulekile ukucacisa amazinga-calcium ne phosphorus. Ukuze ususe pathologies articular ukwenza analysis kwamakhemikhali kwegazi. Linganisa izinto ezifana khona amaprotheni C-esisheshayo, i-rheumatoid isici, amazinga uric acid.
Valgus deformity ka kwedolo: ukwelapha izifo
usizo Esifike Ngesikhathi ngabezempilo deformity valgus kungaholela ukuqedela zokulungisa uzwane okwenyanga futhi ayeke ugobile phambili. Ngo ukuphambuka wawubona ukuhlinzwa edolweni wenziwa. Lapho senza izindlela olandelanayo yokwelashwa zihlanganisa:
Umlayezo futhi ukuze athole ukwelashwa komzimba.
izinqubo athole ukwelashwa komzimba.
Ugqoke izicathulo wamathambo futhi ekhethekile amadolo.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukwelashwa esiyimbangela. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-3 ubudala kufanele zithole vitamin D ne bechitha isikhathi e-ilanga. Abadala owaphawula ukuntuleka calcium, le amaminerali iqondiswa ngefomu iphilisi.
Massage ngesikhathi ugobile kwedolo ezinganeni
Eyodwa yezindlela eyinhloko kwelashwa massage. Valgus deformity ka kwedolo kusaqalwa izingane bakwazi zinyamalale ngokuphelele ngenxa ukucindezeleka mechanical phezu imisipha kanye nokuzivocavoca yokwelapha. massage Yiqiniso kufanele kube amasonto 2-3. Khona-ke yenza nekhefu 1-2 izinyanga. Ngemva kwalokho inqubo, ukuphinda Yiqiniso futhi. Ukubhucungwa kuwukuziphulula futhi trituration lumbar nomgogodla sacral, ngemuva emlenzeni ethangeni. Khona-ke, ukusebenzisa ezihlukahlukene ukunyakaza yokwenziwa emlenzeni, okuhloswe ngaso ekushintsheni isikhundla ngokuhlanganyela. Phakathi massage, udinga ukukhokha ukunakekela okukhethekile condyle yangaphakathi. Kufanele kuthathwe kancane kancane uwulethe isikhundla salo esivamile.
umsebenzi zokwelapha endaweni ugobile ngamadolo
Ukuzivocavoca udlala indima ebalulekile izifo ezifana valgus deformity ka kwedolo ezinganeni. Ukwelapha kuye kwaba nomphumela omuhle. Isakhiwo umzimba zihlanganisa: flexion asebenzayo nokwelulwa nokuhamba emalungeni, unyawo ngokushintshana. Kunconywa ukuhamba ku tiptoes, nge ohlukanisile ngamadolo ezimfushane, ahlale cross-ezinemilenze. Ukuvivinya umzimba njalo futhi ukubhucungwa kuholela alungise ukuma umlenze iminyaka 4-5.
ukuphathwa Steel ka ukusonteka
ukwelashwa Steel kuboniswa ngenxa ukusonteka ezinzima. Indlela efanayo wenziwa, uma ezinye izindlela zehlulekile. ukwelashwa Steel iyona yokufakelwa ithambo waphuka futhi ukukhiya ngokuhlanganyela isikhundla. Nokho, ukusebenza ezifana asikwazi ukwenziwa esikhathini sokukhula olunzulu.
Ukuvimbela ugobile amadolo
Ukuze valgus deformity ka kwedolo athuthukile, kubalulekile ukuthobela izinyathelo. Lezi zihlanganisa:
Ukusetshenziswa ukudla Vitamin izakhiwo abacebile calcium.
Ukwethulwa umthamo prophylactic vitamin D isukela enyangeni 1 kuya eminyakeni emi-3.
Daily uhamba nengane yakho.
Abadala Kunconywa ukulawula isisindo somzimba, ne ukubonakala ubuhlungu emalungeni, ukufuna usizo lodokotela.
Yiziphi ngesayensi yemvelo? Ukucabanga ku mkhakha esizayo